कसरी कोरियाली मान्छे व्यवहार आफ्नो महिला । कोरियाली डेटिङ
म एक मित्र गए जो एक लागि विनिमय मा सियोल र त्यो दिनांक एक कोरियाली मान्छे को लागि एक जबकि. उहाँले राम्रो देखिन्छ, र सबै, तर एक पटक, तिनीहरूले आफ्नो पूरा मित्र, उहाँले हुन्छ धेरै टाढा र चिसो तिर उनको छ । म अर्थ, सम्पूर्ण टी स्वीकार उनको. भाइचाराको वा किनभने उहाँले लज्जित छ भनेर त्यो छ छैन कोरियन. (अझै पनि छ । म एक मित्र गए जो एक लागि विनिमय मा सियोल र त्यो दिनांक एक कोरियाली मान्छे एक जबकि लागि छ । उहाँले राम्रो देखिन्छ, र सबै, तर एक पटक, तिनीहरूले आफ्नो पूरा मित्र, उहाँले हुन्छ धेरै टाढा र चिसो तिर उनको छ । म अर्थ, सम्पूर्ण टी स्वीकार उनको. भाइचाराको वा किनभने उहाँले लज्जित छ भनेर त्यो छ छैन कोरियन. (अझै पनि एशियाली हुनत) प्लस, म देख्न मा कोरियाली नाटकहरु र सबै, कोरियाली पुरुष गर्छन गाली गर्न एक धेरै, र पनि महिलाहरु जब तिनीहरूले प्राप्त सबै रिस र सबै छ ।, धन्यवाद सबैलाई आफ्नो विचार. त्यसैले, यो सामान्य छ महसुस स्तर को उच्चता पुरुष र महिला बीच मा कोरियाली समाज । बस को बारे उत्सुक कसरी साँचो यी मुद्दाहरू चित्रण गर्दै नाटक मा, यद्यपि तिनीहरूले हुन सक्छ, अधिक वा कम. धन्यवाद फेरि, म विवाह गर्न एक कोरियाली मानिस, र म धेरै याद को मतभेद बीच कोरियाली पुरुष सामान्य मा र पश्चिमी मानिसहरू म हुर्क्यो वरिपरि । मेरो श्रीमान् मलाई राम्रो, उहाँले एक विशिष्ट कोरियाली मानिस । माथि बढ्दै, उहाँले देखे आफ्नो बुबा आफ्नो आमा, रद्दीटोकरी को घर, मातेको प्राप्त र बाहिर जान आफ्नो मित्र संग गैंबल गर्न र महिला भेट्न सबै समय पहिले, उहाँले अन्तमा बाहिर हिंडे. म सोच्न किनभने यो मेरो पति आफ्नो बुबा र बचाउछ जस्तै व्यवहार उहाँलाई सबै लागत मा. मैले देखेको छ धेरै दुरुपयोग भर मेरो समय बीचमा कोरिया मा अन्य जोडे, यद्यपि. म बताउन सक्नुहुन्छ कि यसको छैन कोरियन संस्कृति मा यो रुचि छ, जहाँ म छु । उदाहरणका लागि, म कोरियाली टिभी शो भनेर सम्बोधन वैवाहिक संघर्ष । जब पतिले कुटपिट माथि आफ्नो पत्नी, तिनीहरूले सामान्यतया फोटो पत्नी भएको रूपमा योग्य. पश्चिमी संस्कृतिका, यसको साधारण सहमत कि केही एक पत्नी भन्न सकिन्छ हेरेको शारीरिक हिंसा विरुद्ध उनको, र मिडिया कहिल्यै फोटो एक अपमानजनक पति एक सकारात्मक प्रकाश मा. निस्सन्देह, धेरै छन् अपमानजनक सम्बन्ध मा संसारको अन्य भागहरु, तर म सोच्न यो अधिक स्वीकार सामान्य सार्वजनिक द्वारा यहाँ । मेरो पति कहिल्यै छ, मलाई मारा, तर उहाँले अप्ठ्यारो प्राप्त गर्न एक धेरै अधिक भावनात्मक समयमा संघर्ष भन्दा अधिकांश पश्चिमी मानिसहरूको हुनेछ, र त्यो अर्को फरक म याद । तर, उहाँले पनि धेरै मायालु. के तपाईं पुन उल्लेख आफ्नो मित्र संग शायद तथ्यलाई कारण छ भनेर त्यो छ छैन कोरियन. कोरियाली संस्कृति मा, गैर-दक्षिण एशियाली छैनन् देख्न बराबर कोरियाई, त्यसैले उहाँले शायद गर्छ, एक सानो लज्जित महसुस गरेर उनको छ । पुरानो पटक कोरिया मा, मानिसहरू उच्च मा परिवार । महिलाको स्थिति धेरै कम हो । तर आजकल जवान कोरियाका अधिक रोमान्टिक र मुलायम विपरीत, एल्डरहरूले. म मा थियो जब कोरिया, एक मित्र मलाई भन्नुभयो यस बारे छ । जब एक जोडी, विवाह एक केटी परिवार छ दिन प्रस्तुत र विवाह लागि तिर्न, मान्छे प्राप्त छ सबै लाभ र प्रस्तुत दिइएको हो अनुसार र्याङ्किङ्ग को मान्छे । यदि मान्छे मा उच्चतम र्याङ्किङ्ग मा समाज, यस्तो एक डाक्टर रूपमा, केटी दिन हुनेछ कार, घर आदि. बस जस्तै भारतीय महिला । पछिल्लो समय यसको कानुनी लागि एक मानिस आफ्नो पत्नी पिटे. तर आजकल व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । यसको अवैध दुरुपयोग गर्न एक महिला छ । जे भए पनि, म अझै पनि केही देख्न कोरियाका हकदार व्यक्तित्व देखि एल्डरहरूले. एक पटक जब म थियो मा एक लिफ्ट को एक स्की सहारा, पुरुष कोरियाली थप्पड आफ्नो पत्नी यति कडा अगाडि मलाई र मेरो आमाबाबुले, तर पत्नी राखिएको मौन छ । म पक्का छैन हुँ बारे मा कोरिया मा पुरुषहरु सामान्य तर म मात्र मिति कोरियाली मानिसहरू अब छ किनभने तिनीहरूले मलाई उपचार यति राम्रो, तिनीहरूले छन्, कोमल प्रकारको, विचारशील, र धेरै रोमान्टिक देखि तीन कोरियाका कि म दिनांक छ अब । तिनीहरूले छन् जस्तै सेतो मान्छे र हुनुको बावजुद मुलायम महिला तिनीहरूले धेरै सुरक्षा र पुरुषत्व के बावजुद समाज चित्रण गरिएको छ तिनीहरूलाई छ । नमस्ते, मेरो प्रेमी कोरियाली छ । म साँच्चै यो व्यक्ति निर्भर. त्यो व्यवहार मलाई खैर, वास्तवमा, त्यो व्यवहार मलाई जस्तै एक राजकुमारी छ । म छु छैन कोरियाली यद्यपि, म छु फिलीपींस.
तिनीहरूले. म छैन जस्तो लाग्छ सबै कोरियाका जस्तै हो कि वा म हुँ बस भाग्यशाली ।. उहाँले उठ्छ आफ्नो आवाज को बीचमा तर्क छ । पनि मलाई र आफ्नो मित्र पनि । (केटा र केटी) म प्रयास गर्न उहाँलाई बताउन गर्न शान्त तल, तर उहाँले छ भन्दै उहाँले जस्तो छ । यसको सामान्य उहाँलाई लागि.
म भने यसको अभद्र
मलाई थाहा छ, उहाँले गर्न खोजिरहेको छ यो परिवर्तन पछि, उहाँले यहाँ बस्ने फिलिपिन्समा एक लामो समय को लागि छ । केही कोरियाली व्यवहार आफ्नो महिला अधिक बाटो किनभने आफ्नो पुराना स्कूल हो र तिनीहरूले शायद कहिल्यै साक्षी र सिकेका कुनै पनि प्लाया.
मलाई थाहा म टी
बस संग जान कोरियाली-अमेरिकी मान्छे छ । मलाई जस्तै छ । म व्यवहार गर्न कसरी थाहा, एक महिला । बारी मा केही बैरी सेतो लाग्नुहोस्, केही, रक्सी र हेर्न केही. म एक मित्र गए जो एक लागि विनिमय मा सियोल र त्यो दिनांक एक कोरियाली मान्छे एक जबकि लागि छ । उहाँले राम्रो देखिन्छ, र सबै, तर एक पटक, तिनीहरूले आफ्नो पूरा मित्र, उहाँले हुन्छ धेरै टाढा र चिसो तिर उनको छ । म अर्थ, कुल । मेरो बहिनी विवाह कोरियाली मानिस दुरुपयोग गर्ने उनको नियमित छ । जब यो परिवारको लागि सँगै प्राप्त बिदाहरू, मेरो बहिनी कोरियाली पति मौखिक दुर्व्यवहार मेरो अगाडि बहिनी सबैलाई । हाल, यो कोरियाली मानिस मौखिक दुर्व्यवहार एक नियमित भइरहेका घटना मा हाम्रो छुट्टी परिवार प्राप्त-सँगै । हामी सबै छन् यो लिएर हुनत रूपमा यो एक सामान्य कुरा हो अब । कुनै एक गर्न सक्छन् केहि भन्न किनभने मेरो बहिनी भन्छन् उनको कोरियाली पति ठीक छ । ऐन खुसी अब रुचि छैन, त्यो गर्न प्रयोग गरिन्छ, त्यो विवाह अघि छ । म होइन तापनि यो सिर्फ एक नाटक, तपाईं विचार छ कि नाटक सधैं बन्द आधारित पप संस्कृति र केही प्रतिबिम्ब को वास्तविकता छ । यो के गर्न केहि छ सक्छ, आफ्नो वा कसरी तिनीहरूले सम्म ल्याए थिए, समाजमा, आमाबाबुले मित्र, र स्कूल ।, उत्पीडन वा गोपनीयता चढाइ, प्रतिरूपण, उत्पीडन वा गोपनीयता चढाइ, प्रतिरूपण, वा धम्की, उत्पीडन वा गोपनीयता चढाइ, प्रतिरूपण
← कोरियन केटी सामाजिक डेटिङ च्याट नयाँ मित्र पूरा गर्न को लागि डाउनलोड
महिला गर्ने रोकियो मायालु साझेदारी गर्न के भयो पछि महिला स्वास्थ्य →